Amboary ny olan'ny Wifi ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Maro ireo izay sendra olana isan-karazany taorian'ny fanavaozana ny iOS 7, Maro amin'ireo tatitra momba ny olana no mifandraika amin'ny bateria ary andro vitsivitsy lasa izay dia nasehonay anao ny fomba hanatsarana ny fizakan-tenany.
Androany dia mifantoka amin'ny olana iray hafa sendra mpampiasa maro iDevices izahay. Toa ny iPhone, iPad, ary iPod Touch miaraka amin'ny iOS 7 dia misy fahatapahana (na tsy mifandray aza) avy amin'ny tamba-jotra Wifi. Androany dia te-hanome vahaolana mety ho an'ity olana ity izahay.
Mpampiasa maro rehefa misafidy tambajotra Wi-Fi no miatrika ny olana "Tsy afaka mifandray amin'ny tamba-jotra"Betsaka no nanangona azy tao amin'ny Forum Support diskusi ho an'ny Apple ary nomena vahaolana izay miasa amin'ny iDevices maro. Vahaolana izay hataonay amin'ny iDevice sy ny router.
Hataontsika ao ny iDevice Fomba fiaramanidina.
Handeha any isika Fikirana> General> Reset> Reset Network setting.
Hanomboka ny Router izahay
Ny fanaovana ireo dingana tsotra ireo dia hamaha ny olana mety hitranga izay ny lesoka amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra Wifi an'ny iDevice. Zava-dehibe ny fiezahanao hanao ny dingana rehetra amin'ny Airplane Mode satria maro ireo mpampiasa no tsy afaka nanitsy ilay lesoka tamin'ny fomba tsy mandeha amin'ny Airplane Mode.
Manantena izahay fa tsara vintana ianao ary hanana ny fifandraisana Wi-Fi hiasa feno indray.
Fanazavana fanampiny - Manatsara ny fanjifana bateria ao amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Amboary ny olan'ny Wifi ao amin'ny iOS 7
Heveriko fa i Apple dia efa afaka mitifitra hahazo MegaParche amin'ireo tsy fahombiazana samihafa. Wifi, hafainganana, bateria …… lozika, vaovao izy io nefa somary ratsy kely, sa tsy izany?
Tsy miova ny olana, manana iPhone 4 aho ary tsy misy.
robert42 dia hoy izy:
Mazava ho azy, averinao amin'ny laoniny ny toe-javatra misy ny tamba-jotra ary ny pass rehetra amin'ny Wi-Fi samihafa azonao dia tsy eo intsony. Heveriko fa rehefa nilaza ilay mpiara-miasa ny zavatra tokony hataon'izy ireo dia mahazo fanavaozana izao ary atsaharo ny lalana mihodina maro be.
Mamaly an'i robert42
Azo antoka fa manamboatra azy io izy ireo, saingy mandra-pahatongan'izany dia vahaolana tsara izany.
Ny zava-nitranga tamiko dia ny mahita ireo tambajotra Wi-Fi vitsy dia vitsy, izay manana signal feno ihany.
jonatan dia hoy izy:
Mahatsiaro ho toa anao koa aho. Talohan'ny nahatratrarako wifis 6 na 7 tany amin'ny toerana sasany ary ankehitriny amin'ireo toerana ireo ihany dia tsy mahita izany. Ary ny iray amin'ny tranoko eo ankavanana, satria ao anatiny aho raha tsy mitovy.
Mamaly an'i jonatan
ny tahony dia hoy izy:
Izany dia mitranga amin'ny fanavaozana!
Ny hoe tsy mampianatra ny vatolampy dia mitovy foana, ios vaovao, fanavaozana ary pumbaa lesoka amin'ny tutiplen !!!
Mamaly an'i Pringaos
Ny tena izy dia tsy maintsy manavao ianao mba hiseho ireo bibikely, raha tsy izany dia hitovy amin'ny iOS 7.1 ... 7.2 ... sns ...
Tsy azo atao mihitsy ny mahazo rindrambaiko raha tsy misy bibikely, izany no mahatonga ny fanavaozana
Eny, tsy manana olana aho, isaky ny manana wifi amin'ny kinova isan-karazany amin'ny iOS aho dia namaha azy tamin'ny fametrahana azy tamin'ny fomba fiaramanidina (tsy maintsy miandry ianao mandra-panjavon'ny anaran'ilay mpandraharaha raha tsy misy vokany) ary na ny wifi na ny 3G dia niasa ho ahy foana. ary ny sasany manaratsy be ...
Ary ho an'ireo izay manomboka very lakile, ny olona dia manafay sy manova fanalahidy, ary ny mahantra iWep dia nankaleo azy.
Tonga lafatra amin'ny vahaolana omenao, voavaha daholo ny zava-drehetra
NHG30 dia hoy izy:
Misaotra betsaka; voavaha ny olanao noho ny fanampianao
Valiny amin'ny NHG30
Enry dia hoy izy:
Mamela vahaolana kely ho an'ireo izay tsy mahomby amin'ny wifi amin'ny alàlan'ny iphone, iPad sns, ity vahaolana ity dia hita be dia be ao amin'ny forum Apple ary io no encryption fiarovana, nanana wpa2 aho ary nanahirana be ny iphone-ko, ratsy ny fifandraisana, ratsy ny fifandraisana, handeha io Ary tonga, ny whatsapp dia elaela nifandray, ka ny famakiana tao amin'ny forum novakiako dia novaiko ho fanafody wep sy masina. Tandremo fa tsy ny modem rehetra no afaka maneho an'io olana io amin'ireo izay nanana io olana io ihany. Andramo indraindray fa tsy ilay fitaovana no olana
Mamaly an'i Enry
Vahaolana izay araka ny filazanao fa mamoaka amin'ny toerana maro izy ireo, saingy mampihena ny fiarovana ny WEP. Saika hamela ny tamba-jotra hisokatra ho an'ny olona manana fahaiza-manao solosaina kely hahazoana ny lakileny ... Tsy manoro izany aho
anjely azael dia hoy izy:
Manana an'ity olana ity foana aho, hoy izy tamiko (tsy afaka nifandray tamin'ny tamba-jotra)
Mamaly an'i anjely azael
ry namako, fanontaniana iray no ho antennan'ny iphone ami raha mitady ny signal fotsiny aho fa tsy miditra
Jacqueline magaña dia hoy izy:
MISAOTRA ANAO!!!!!!!!!! 😀
Valiny tamin'i Jacqueline Magaña
Joshara dia hoy izy:
Ny ahy tsy nahita tambajotra na nifandray tamin'ny iray trano. Namerina nanangana ilay tamba-jotra aho, nametraka azy tao amin'ny maody fiaramanidina ary namerina ny wifi indray ary nifandray tamin'ny farany.
Valiny tamin'i Joshara
Misaotra !! Voavaha ny olana !!!
andao jerena fa efa namaha azy tamin'ity fomba manaraka ity aho. amin'ny finder dia tsindrio raha mandeha aho ary avy eo raha manana Maverick ianao dia tsindrio ny alt key, tsara ao amin'ny iTunes library dia mila mamafa ny fisie iphone ipsw ianao. avy eo sokafy iTunes ary amin'ny preferences iTunes dia tsindrio ireo fitaovana avy eo amin'ny iphone ary efa nesoriko ireo kopia nomaniny ho solon'izay ary iray ihany no nataoko tamin'ny volana Janoary. avy eo nandeha namerina tamin'ny laoniny ny iPhone tamin'ny kopia nomaniny aho ary voavaha ny olana. Tokony holazaiko fa niantso an'i Apple aho ary novain'izy ireo ilay fitaovana ary rehefa nohavaoziko tamin'ny Ios 7 dia nitohy ny olana, saingy voavaha izany fomba izany. Tokony holazaiko ihany koa fa ny backup nomeko azy dia avy amin'ny iPhone 5 an'ny zanako vavy.
Ahoana raha manao an'io fomba io aho fa ny iPhone-ko no ampiasaina ??
Ny ahy dia 4S ary tsy mety amiko. Raha ny marina, tsy hoe tsy mamantatra ahy izy io, saingy tsy mamela ahy hametraka modely Wi-Fi aho. Misy vahaolana hafa ve? Misaotra betsaka mialoha 🙂
Salama david ny mailako dia andresemiro@hotmail.com Manana fahasahiranana mitovy amin'izany aho, raha maharesy azy dia soraty aho
lorenita dia hoy izy:
4s ny iPhone-ko, narahiko ny dianao ary tsy niverina izy io, nijanona mainty ihany ny findaiko niaraka tamin'ny sary famantarana paoma ... Inona no ataoko ????
Mamaly an'i lorenita
Efa nataoko tamin'ny fomba rehetra izany ary tsy afaka namaha izany olana izany aho
Tsy hanana karazana vahaolana hafa afaka manampy ahy izy ireo
Victtoria087 dia hoy izy:
Efa nataoko ny dingana fa tsy n'inona n'inona !!! Ampio aho, inona izao no ataoko?!?
Nahavita ny dingana rehetra aho, namerina tamin'ny laoniny ny fikirakirana ny tambajotra, niova hatramin'ny wpa ka hatramin'ny wep, niantso ny orinasa manome ahy wifi aza aho ary naverin'izy ireo ny modem, saingy ny olana dia mitohy ary ao an-tranon'ny reniko dia mety amiko izany. Fantatro fa ho ... fanampiana
Tao amin'ny biraoko dia nametraka teboka fidirana izahay hanitarana ny Wi-Fi, saingy afaka nifandray ny olon-drehetra afa-tsy izaho tamin'ny iphone4, na dia ny chafa be indrindra aza afaka mifandray, dia mahatsikaritra ny signal fa rehefa vitako ny mametraka ny teny miafiko dia tsy mampifandray izany
Misy manana sosokevitra ve ????? ny mailako: jmcplus@hotmail.com
Sara27 dia hoy izy:
mbola mitovy ihany. toy ny volondavenona toy ny taloha ihany. Misy mahalala fomba hafa ve? Tena tiako izany. fiarahabana
Valiny ho an'i Sara27
Xakin dia hoy izy:
Ny iPad-ko dia tsy nahita tamba-jotra Wi-Fi nandritra ny 3 herinandro teo. Olona sendra izay mitovy aminy ary milaza amiko ny fomba namahavanao azy azafady? MISAOTRA
Mamaly an'i Xakin
Manana ipad4 aho ary raha mampifandray amin'ny Youtube aho ary manokatra horonantsary dia very ilay signal. Ny ipad ihany no hitranga. Manana Windows, Linux ary Android aho ary tsy mandeha tsara .. A. Fa mampiasa ipad. Very ny rehetra. Signal, nanao andrana nampifandray ny ipad tamin'ny Internet finday ary niasa tsara ny Youtube. Ny olana tsy tapaka dia ao amin'ny modem fa amin'ny iPad ihany. Misy fambara ..?
hulck dia hoy izy:
Vonona, ami dia apetrako amin'ny volondavenona ny bokotra wifi, nataoko ireo dingana izay refesinao ary XNUMX% aho ... Misaotra anao tamin'ny fandraisanao anjara lehibe ... Efa nangetaheta be aho ...
Mamaly an'i hulck
Mizara ny zavatra niainako momba an'io lohahevitra io aho rehefa namaha ny olana tamin'ny farany.
Roa herinandro teo ho eo no nisy ahy tamin'ny olan'ny wifi satria indraindray aho nivadika 3G, nanitatra ny kaontiko finday. Ary nanavao ny iOS vaovao fotsiny aho ary nieritreritra fa ho voavaha ny olana saingy indrisy izao fa tsy afaka nijanona intsony tamin'ny Wi-Fi azoko ilay (azoko izao rehefa avy namaky ny maro tamin'ny fahasosorana mitovy) Wi-Fi fotsy miaraka amiko ny angano «Wi-Fi tsy misy» rehefa avy namaky momba azy io dia napetrako tamin'ny famahana ny olana ny heriko.
1.-Natomboko tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra rehetra ary avy eo tsy nisy narahina ny olan'ny wifi, ka nitovy ny zava-drehetra fa eny, toa maivana kokoa ilay rafitra ary hoy aho anakampo farafaharatsiny izao dia haingana kokoa.
Fikirana / General / Reset / Reset ny fikirana rehetra
2.-Avy eo dia nanapa-kevitra ny hamafa ny atiny sy ny fanaingoana (namporisihina aho hanao an'io satria manana ny zava-drehetra ao anaty rahona aho) nitohy ny fahasosorako satria nijanona ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ny fotoana roa hanidiana (hivaingana) ny rafitra ary izaho tsy maintsy namerina (mitazona ny bokotra fanombohana sy ny bokotra an-trano mandritra ny 10 seg) satria tsy afaka miditra amin'ny bokotra wifi ao anaty toerana napetrako ny data ary nampiala ahy io safidy io ihany, dia nanandrana niditra ny safidy wifi indray aho ary farany dia afaka miditra manampy manampy ny teny miafina ary farany amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra.
Fikirana / General / Reset / Delete ny atiny sy ny fikirana
NAOTY: Naharitra 3 ora teo am-pikarohana ny vahaolana manokana nataoko satria na eo amin'ny tontolon'ny haitao hafahafa aza ny olana dia tsy mitaky fanafody mitovy, manome an'ity safidy iray ity aho ary lazaiko azy ireo hanandrana aloha (alohan'ny hamerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra) alao ny angon-drakitra finday ary andramo miditra ny safidin'ny Wi-Fi amin'ny alàlan'ny fanovana ihany koa, satria araka ny efa hitantsika rehetra fa sangisangy ny fahazoana Wi-Fi amin'ny alàlan'ny foibe fanaraha-maso.
Mirary soa ary eto dia hanohy hamaky izahay raha mbola manohy mamela an'ity karazana FAHAMARINANA LEHIBE ity ao amin'ny rafitra ny manam-pahaizana Apple ary tsy misy na inona na inona hamenoana ireo banga amin'ny fifandraisana ireo.
Gouki dia hoy izy:
Nahavita nampiasa wifi hafa aho tamin'ny fomba manaraka, nanao backup tamin'ny iPhone iray manontolo aho mba tsy ho very angon-drakitra, naverina tamin'ny iOS 7.1 aho, tsy maintsy namerina ny raoterako (TPLINK) ary namela azy tsy hanana teny miafina, dia niova aho avy amin'ny mac-ko ary niverina nametraka teny miafina amin'ny iphone ary dia izay. Tsy haiko raha olana amin'ny tambajotra misy encrypt na tsy mahomby amin'ny motherboard ity, fa misy zavatra. Miarahaba anao ary mirary soa eto amin'ity tontolo adala ity.
Mamaly an'i Gouki
Manavao ny iphone 5 aho raha manana signal Wi-Fi fa tsy toy ny teo aloha izao dia tsy maintsy mifikitra amin'ilay modem aho, zavatra tsy nitranga teo aloha, raha averiko io dia ho voafafa daholo? na tsy ilaina izany
Valio i luis gomez
Misaotra betsaka, efa voavahako ny olana.
avy eo lazao anay hoe ahoana ry josé!
Miala tsiny fa omaly aho dia niaraka tamin'ny fantsom-pifandraisana finday ary nifandray tamin'ny Wi-Fi tao an-tranoko ary tao anatin'ny drafitra dia efa roa andro izay no nifindrako tsindraindray fa tao anatin'ny fotoana nifarana ary tonga alina aho hita fa nanana ny Wi-Fi tao an-tranoko toa olon-tsy fantatra aho, izany hoe nangataka tamiko ny teny miafiko ary niditra in-1000 aho ary tsy mandeha io, namerina aho, naveriko ny fananganana tambajotra sy ny fikirakirana, azafady mba ampio aho 🙁
Misaotra! Tao anatin'ny roa minitra dia namaha olana iray izay nampiala-voly ahy nandritra ny 2 ora aho! Misaotra betsaka ary arahaba!
Clau dia hoy izy:
Napetrako ny maody fiaramanidina ary narahiko ireo dingana ary niverina ilay wifi, tsy nisy olana
Mamaly an'i clau
Therko dia hoy izy:
Mampalahelo fa zavatra mitovy amiko no nitranga tamiko tamin'ny finday an'ny General Manager an'ny orinasako, tsy mitombina foana io…. mandra-pahatongan'ny IP natokana ho azy tamin'ny mac ary voavaha ny olana…. Tsy fantatro, raha misy olona hampiasaina nefa… tsy afaka hosedraina sy hiala tsiny amin'ny IPHONE an'ny GENERAL MANAGER ianao.
Valiny tamin'i Therko
Nancy dia hoy izy:
Hatramin'ny nanavaozako ny IOS 7.1.1 dia manana olana amin'ny Wifi aho. Nesoriko ilay tamba-jotra satria tsy nahomby tamin'ny asako aho ary rehefa te hifandray indray aho dia tsy namela ahy. Afaka manao comapeo rehetra aho, izaho irery tsy afaka. Efa noraisiko izy io mba hojerena ary ny nataon'izy ireo dia nanoro azy (nofafany daholo ny atiny). Nampitahako izany mba hamerenako ny mombamomba ahy. Ary tsy niova izany. Efa nataoko daholo ny namerenako ny tontolon'ny tamba-jotra izay tsy fantatro hoe impiry, averiko amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fanombohana sy ny bokotra an-trano. Ny zavatra hafahafa dia mandeha any an-kafa aho ary raha mandray ny wifi ianao. Heveriko fa tsy ny antena. Misy olona afaka manampy ahy.
Valiny tamin'i Nancy
Tokony ho 6 herinandro lasa izay dia nanana «wi-fi» volondavenona malaza aho tamin'ny iPhone 4-ko ... Saika nataoko daholo ny zava-drehetra mba hanandramana nanamboatra azy, hoy aho ALOHATRA satria mila manala azy na manafana azy amin'ny fanamainana ... Ny vahaolana tokana ilaina dia ny mitondra azy io any amin'ny toerana nividianako azy ary hanamboatra azy ireo izy ary naharitra 3 herinandro ... Na izany na tsy izany dia hitako fa tsy mahita tambajotra tsy misy tariby izy io, nataoko daholo ny zava-drehetra mba hanandramana nanamboatra azy io ary rehefa nataoko ny hevitrao? NY GRAY WI-FI INDRAY !!!! indroa ao anatin'ny telo volana! Mahamenatra izany! Miezaka aho ny hanomezan'izy ireo ahy vaovao na Android izay mbola tsy nifankafiziko mihitsy, fa ny mahita ny zavatra hitako… Tsy maintsy zatra an'izany aho….
deinny dia hoy izy:
Manana ny olana amin'ny ipad aho, maka ny signal amin'ny router izy io, manokatra fb sy tw aza, fa tsy hanana safary na app store aho, manampy azafady, lasa adala aho, ary naveriko tanteraka izany. , ary nanao configurations 5 arivo teo ho eo ho an'ny router aho ary tsy nankasitraka na inona na inona.
Mamaly an'i deinny
Misaotra, nanampy betsaka ahy io.
Niezaka ny zava-drehetra aho ary mbola tsy afaka mifandray amin'ny wifi manana iPhone 5 aho
Evert Cruz dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, efa nataoko izany ary tsy nisy, naveriko tamin'ny laoniny ary tsy, niantso an'i Apple aho ary tsy nilaza tamiko mihoatra ny zavatra mitovy amin'ilay pejy izy ireo, tsy mifandray izany raha tsy amin'ny manaraka. amin'ny modem ary tena mahasosotra tokoa ity, misy olona manana vahaolana hafa izay niasa ho azy azafady famoizam-po ity toe-javatra ity. MISAOTRA
Valiny tamin'i Evert Cruz
RAY EO AMIN'NY IPHONE 4S NO RENAO. Faly be aho fa VOLA VOAFETRA 2 TAONA IZAO ARY MBA Hivoaka AMIN'IZAO SINKA ITY. TSY marina izany. Tsy hividy IPHONE intsony aho.
Mamaly an'i nancy
TSY NANASA AZY ITY, avereno io ary tsy misy!
Bari dia hoy izy:
ovay ny antena wifi ary 101% io
Mamaly an'i bari
bastian dia hoy izy:
MISAOTRA BETSAKA ?
Mamaly an'i bastian
PACO MARTIN GIRALDO dia hoy izy:
Manana iPad 16 izay ampiasainay an-dakilasy izahay. manana karazana seranam-piaramanidina telo samy hafa isika amin'ny lalantsara 25 metatra ary, isaky ny misy izany dia asehony anay ny takelaka rakotra rehetra amin'ny ipad rehetra, fa tsy mandeha amin'ny Internet fotsiny izy ireo. Mahasosotra ary indraindray dia mahatonga anao te-hividy androids sy hanadala ireo guru manaratsy ao amin'ny Apple Nahoana ny helo no tsy maintsy nanapa-kevitra ny amerikana fa handany ny fiainany amin'ny fitadiavana tambajotra ny iPad-ko ary manome azy rehefa te hifandray foana aho iray? Ahoana ny fahasarotan'ny fametrahana baiko mampihomehy hampiasa ny tambajotra voafantina IHANY?
Ny fanampian'ny paoma dia manohana diky hafa tsy misy ilana azy.
Valiny amin'i PACO MARTIN GIRALDO
Lety dia hoy izy:
Tsara! Nahavita aho ary nety tsara! Misaotra anao!!!
Valiny tamin'i Lety
Samsung dia manomana Galaxy S4 volamena ... Fifandrifian-javatra?